The Ab Presents Nepal » बाबुराम जुन पार्टीमा गयो त्यही पार्टी भंग गर्छन किन ? अहिलेसम्म सातवटा पार्टीमा प्रवेश गरे !
बाबुराम जुन पार्टीमा गयो त्यही पार्टी भंग गर्छन किन ? अहिलेसम्म सातवटा पार्टीमा प्रवेश गरे !
काठमाडौं -: राजनीतिक भनेको अजीव हुँदो रहेछ । त्यसैले राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुने बताउने गरिएको हो । नेपालका धेरै नेताहरू एउटै पार्टीमा टिकेर राजनीति गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट राजनीति गर्नेहरू त वि रलै छन् ।
यस्तै नियति भोग्नेमध्येमा पर्छन् डा.बाबुराम भट्टराई । उनी अहिलेसम्म सातवटा पार्टीमा समाहित भइसकेका छन् । तर, त्यसअघि उनी सहभागी पार्टी प्रायः सबै भं ग भएका छन् । बाबुराम व्यक्ति मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री भएकाले संस्थाको हैसियत बनाइसकेका छन् । तर, पनि उनको राजनीति सधैं अस्थिर रहँदै आएको छ ।माओवादीमा दुई दशक राजनीति गरेका उनी प्रष्ट वक्ता र छवि बोकेको नेता हुन् । आफूलाई मनमा लागेको भनिहाल्छन् । त्यसैले पनि उनको राजनीतिक जीवन अस्थिर रहँदै आएको हो ।
बाबुराम सुरुमा नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध थिए । तर, उनी लामो समय त्यसमा रहेनन् । पार्टी जीवन भने उनले मशालबाट सुरु गरेका हुने । मशालमा पनि उनी धेरै रहेनन् । त्यो पार्टी छाडेर उनी एकता केन्द्रमा प्रवेश गरे ।२०४८ सालको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि बने । त्यसको चार वर्षपछि नै २०५२ मा एकता केन्द्र छाडेर माओवादीमा लागे । करिब दुई दशक सोही पार्टीमा रहेका बाबुराम माओवादी केन्द्रबाट राजनीति गर्न थाले । दुई तीनवटा कम्युनिस्ट घटक मिलेर माओवादी केन्द्र बनेको हो । माओवादी केन्द्रबाटै उनी प्रधानमन्त्रीसम्म बने
२०७२ सालमा संविधान जारी भयो । लगत्तै उनले माओवादी केन्द्र पनि छाडे । त्यसपछि उनले आफ्ना केही साथी र पूर्वप्रशासकलाई समेटेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे । नयाँ शक्ति गठन गरे पनि कांग्रेसको सहयोगमा सांसद जिते ।एक वर्षपछि नयाँ शक्ति पार्टीलाई संघीय समाजवादी पार्टीमा मिलाए र समाजवादी पार्टी बनाए । अहिले त्यो पार्टी पनि राजपामा मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । पछिल्लो समय धेरै पार्टी प्रवेश गर्ने नेतामा बाबुरामले कीर्तिमान नै बनाएका छन् ।